Farmaajo Beesha Hawiye wuxuu u sameeyey wax aan horey u dhicin haddana weli qeyladooda way socotaa! - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo Beesha Hawiye wuxuu u sameeyey wax aan horey u dhicin haddana...
Farmaajo Beesha Hawiye wuxuu u sameeyey wax aan horey u dhicin haddana weli qeyladooda way socotaa!
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan iyo markiii lagu dhawaaqay golaha wasiirada iyo taliyayaasha Ciidamada waxaa soo food saaray culeys weyn oo kaga imaanayey beelaha Soomaaliya oo Madaxweynaha ku eedeeyey inuu wax xad dhaaf ah u sameeyey Beesha Hawiye.
Markii midaas laga soo gudbay, haddana Madaxweyne Farmaajo wuxuu sameeyey arrin kale oo ay dad badan wax iska waydiiyeen markii uu Madaxweynaha isbadal ku sameeyey taliyayaashii ciidamada markaas oo loo badiyey Hawiye.
Sidaas Darteed Beesha Hawiye waxaa la gudboon inay culeyska ka qaadan Madaxweyne Farmaajo isla markaasna ay ogolaadaan inay Soomaaliya horey u socoto, kana gudubto sheekada qabiilka loona gudbo sidii si wadajir ah looga wada shaqeyn lahaa inaysan Soomaaliya ku laabaan wixii horey usoo dhacay.
Muddo 8 Sano oo xiriir ah ayey Hawiye ahaayeen Madaxweynaha Soomaaliya, marka laga hadlayo dhabtana ma jirin culey weyn oo beelaha kale uga imaanayey, maatana waxaa wax laga xumaado ah in Hawiye oo ay dowladda Marti ugu tahay Caasimadda ay noqdaan kuwa ugu horeeyo ee mucaarado.